FANAFIHANA TOERAM-PISOTROANA TAO FIANARANTSOA : Lasan’ny jiolahy ny vola an-tapitrisany
Ny faran’ny herinandro lasa teo, tonga nanafika tokantrano tao amin’ny fokontany Soanierana ao an-tampon-tanànan’i Fianarantsoa ny jiolahy mitam-basy miisa dimy. 17 septembre 2019
Mpivarotra zava-pisotro mahamamo ity tokantrano ity raha ny angom-baovao ka saika alina amin’ny 11 ora any ho any vao mihidy. Tamin’izany indrindra no nanararaotan’ireo mpandroba nanao ny asa ratsiny ka avy hatrany dia nitsofoka, nanambana basy ny mpivarotra sy ny mpanjifa mbola nirevirevy tao amin’ity toeram-pisotroana ity.
Noho ny tahotra sao ho voatifitra dia namoaka vola tamina kitapo avy hatrany ny tompon-trano tamin’io fotoana io. Vatany vao naharay izany anefa ireto olon-dratsy dia tafaporitsaka nitsoaka avokoa. Taorian’izay tranga izay vao afaka nampandre ny mpitandro filaminana izy ireo. Tsy mbola voafaritra mazava kosa ny vola lasana’ny jiolahy saingy nofaritan’izy ireo ho amina tapitrisany ny very. Andalam-panaovana fanadihadiana ny raharaha ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68197) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (638) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (342) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (227) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (195) 18 février 2020